Taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah ee dhabta ah ee Bose ayaa laga iibiyaa Amazon - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah ee dhabta ah ee Bose waxay ku iibsan yihiin Amazon - BGR
Shalay, waxaan kuu sheegnay heshiis kaa dhigaya inaad lumiso labo ka mid ah dhegaha dhegaha Bose ee 49 $ kaliya. Heshiiskan marwalba waa la heli karaa haddii taasi adiga ku danayso, laakiin dad badani waxay doorbidaan taleefoonnada gacanta ee Bluetooth. Haddii aad rabto inaad gooyso xadhkaha oo aad hesho laba ka mid ah dhagaha-dhegaha tooska ah ee bilaa-waayirka ah, qalabka dhegaha lagu ciyaaro Bose SoundSport Bilaash runtii Wireless ha u qalmin si ka sii wanaagsan. Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu iibsado lammaane sababtoo ah waxay ku iibinayaan qiimo ugu hooseeya 2019.
Telefishannada TRULY wireless ee madaxa-bannaan ee xornimada dhaqdhaqaaqa, oo ay ka buuxaan tikniyoolajiyad ka dhigaya inay muusiggu dhawaaq yahay oo xoog badan yahay
Telefoonnada dhagaha waa dhidid iyo cimilo u adkaysata (oo leh qiimeyn Ipx4) waxayna la imaanayaan 3 lammaane kala duwan oo ah maqalka + Dhacdooyinka isboorti (ee cabirkooda S / M / L) oo bixiya kalsooni sugan
Ilaa iyo saacadaha 5 ee wax akhriska oo ay la socdaan culeys walba iyo 10 saacado dheeri ah oo ay kujiraan kiis dacwad qaadis ah ayaa ka mid ah. Waqtiga lagu amro sidoo kale waa saacadaha 2.
Raadso taleefannada dhagaha ka luntay ee leh barnaamijka 'xiriiriyaha' isku xidhka 'Bose' ee 'raadso buroobadayda'
Cusbooneysiinta Firmware si kor loogu qaado is-dhexgalka maqalka-fiidiyowga ee macaamiisha isticmaalaya iPhones, iPads, iyo aaladaha kale ee Bluetooth ee taageeraya nooca AVDTP 1.3 ama wixii ka dambeeya, oo laga heli karo arjiga Isku xirka. Teknolojiyada isku xirka: Bluetooth Wireless
Qalabka dhagaha ee loo yaqaan 'EarSport Free' waxay leeyihiin dhowr ah mikrofoonno kumbuyuutarro lagu dhisay oo ku yaal madaxa dhegaha saxda ah sidaa darteed waad u adeegsan kartaa inta lagu jiro wicitaannada markii lagu xirayo taleefanka gacanta ee casriga ah ee Bluetooth-ka. Wicitaannada codka waxaa lagu maqli doonaa oo keliya dhegta midig
. Raac @BGRDeals on Twitter si aad ula socoto dalabyada ugu dambeeyay uguna guulaha badan ee shabakada. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan ayaa laga yaabaa inay dhacayaan waqti kasta. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.